Rivaldo: “Inkastoo Neymar weli uusan gaarin heerka Messi iyo Ronaldo, haddana waxa uu noqon doonaa xidigga Adduunka” – Gool FM
Rivaldo: “Inkastoo Neymar weli uusan gaarin heerka Messi iyo Ronaldo, haddana waxa uu noqon doonaa xidigga Adduunka”
Haaruun August 3, 2016
(Barcelona) 03 Agoosto 2016 – Xidiggii hore ee kooxda Barcelona iyo xulka Brazil Rivaldo ayaa aaminsan in laacibka da’da yar ee Neymar Jr uu mar uu noqon doono xidigga ugu wanaagsan Caalamka.
Rivaldo waxa uu kooxda Barcelona la qaaday 2 Horyaalka Spain ah 5 sanadood ee uu ka ciyaarayay Camp Nou, waxaana 1999-kii loo magacaabay Abaalmarinta FIFA ee xidigga ugu wanaagsan Caalamka.
“Maanta (Neymar) waxaa mar walba ka horreeya Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, kuwaasoo isu geyn ku guuleystay 8 Kubbadood oo Dahab ah, laakiin Neymar waxa uu qabanayaa shaqo wanaagsan, waqti aan dheereynna wuxuu noqon doonaa laacibka ugu fiican Adduunka” ayuu Rivaldo u sheegay Barcelona TV.
“Waa ciyaaryahan wanaagsan shaki la’aan, wuxuuna noqon doonaa kan ugu sarreeya caalamka, markii Barcelona ay soo iibsatay waxaan iri wuxuu noqon doonaa midka ugu fiican kubadda cagta, si tartiib tartiib ahna haatan waddadaasi ayuu ku sii socdaa” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Rivaldo.
Kooxo dhowr ah oo ay dhegaha u taagan yihiin kaddib markii Julian Draxler uu xaqiijiyey inuu ka tagayo Wolfsburg
Ilkay Gundogan oo Man City ku soo dhaweeyey saxiixa cusub ee kooxdaas Leroy Sane